विश्वकै अनौठो शहर ! जहाँ कसैसँग ठट्टा गर्न पाइदैन् ! – MediaNP
काठमाडौँ । कतिपय मानिसको बानी हुन्छ जो कोहीसँग बोल्दा पनि ठट्टा गर्ने जिस्कने गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु कसैसँग जिस्किएको मन पराउँछन् । जिस्किएर नै रमाउने उनीहरुको बानी हुन्छ । तर विश्वका केही यस्ता शहरहरु रहेका छन् जहाँ ठट्टा गर्यो भने जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
सुन्दा अपत्यारोलो लाग्ने यस्तो नियम फिलिपिन्सको बिनालोनान शहरमा रहेको छ । जहाँ ठट्टा गर्दा जरिवाना गर्ने मात्र हैन् सडक सफा गर्ने सजाय दिइन्छ । नचाहिदो अफवाह नफैलियोस् भन्नको लागि शहरमा यस्तो कानुन राखिएको हो । उक्त शहरका मेयर रेमन गइकोले उक्त कानुन यही मे महिनादेखि लागु गरेको बताएका छन् । अनावश्यक कुरा गर्नुलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ । ठट्टा गर्ने बानीको कारण शहरमा अपराधिक घटनाहरु बढेपछि स्थानीय सरकाले यस्तो नियम राखेको हो ।
नियम अनुसरा पहिलो पटक ठट्टा गर्नेलाई ४ सय २० रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिनेछ भने ३ घण्टासम्म सडक सफा गर्ने तथा फोहोर उठाउनुपर्नेछ । दोस्रो पटक नराम्रो अफवाह फैलाउने व्यक्तिलाई अन्य सजाय बढाइनेछ । २१ सय रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तथा ८ घण्टासम्म सडक सफा गर्ने सजायँ हुनेछ । बिनालोनानको छिमेकी शहर मोरेनमा पनि २०१७ देखि नै यस्तो नियम लागू भएको छ । यद्यपी दिनभर ठट्टा गर्न नपाएपनि रातको दश बजेपछि चाही पाइन्छ । गर्मी मौसम सुरु भएअनुसार ठट्टा गर्ने अफवाह फैलाउने बानीको वृद्धि भएको कारण ४४ वर्षका मेयर रेमन गुईको अनुसार यो नियमले मानिसको जिवनलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रेरित गर्ने बताएका छन् ।